The State Counsellor receives United Nations Secretary-General’s Special Envoy on Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The State Counsellor receives United Nations Secretary-General’s Special Envoy on Myanmar
(Nay Pyi Taw, 15 July 2019)
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received the United Nations Secretary-General’s Special Envoy on Myanmar Mrs. Christine Schraner Burgener at 1600 hrs, on 15 July 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, the Special Envoy shared her experience of her recent visit to Rakhine State and informed her of her work plan including submission of the report on the situation of Myanmar to the United Nations General Assembly. They also exchanged views on stepping up efforts for commencement of the repatriation process, social cohesion among the different community in Rakhine State, improving ground situation including ensuring security and greater freedom of movement, providing better access to basic needs such as education, and health for all communities.
Also present at the meeting were U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation and senior officials from the Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Schraner Burgener အား ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် အထူးကိုယ်စားလှယ်က ၎င်း၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် အတွေ့အကြုံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ် စတင်နိုင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်စွာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနေထိုင်နိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပိုမိုရရှိရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ရရှိရေးအပါအဝင် မြေပြင်အခြေအနေ တိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။